ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဒိုင်အီဟတ်ဆုမီရာများ | ဒိုင်အီဟတ်ဆုမီရာ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl White Daihatsu Mira 2009 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ??????????...
Pearl White Daihatsu Mira 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Daihatsu Mira 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Daihatsu Mira 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Daihatsu Mira 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Daihatsu Mira 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 106 ညှိနှိုင်း
Silver Daihatsu Mira 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. အသံ...
white Daihatsu Mira 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတင...
ဒိုင်အီ ဟတ်ဆု မီရာ များ
ကား အသေးစားလေးတွေထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ဒိုင်အီ ဟတ်ဆုရဲ့ မီရာကားလေးတွေကို ၀ယ်ယူစီးနင်းရာမှာ ဈေးချိုမှု၊ မြို့တွင်း ကားအသုံးပြုမှု အဆင်ပြေမှုတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းမှာ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ဌင်း ကားအမျိုးအစားလေးတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းက ဆူဇူကီး တံဆိပ်ထဲက ကယ်၇ီ ထရပ်ကားလေးတွေရဲ့ ဈေးလောက်ပဲ ရှိတဲ့ အတွက် အထူးပင် သက်သာလှပါတယ်။ အင်ဂျင် ဆီစားကလည်း သက်သာတာမို့ အသုံးပြုရာမှာ အဆင်ပြေလှပါတယ်။ ကားကလည်း အသေးစား ကိုယ်ထည်နဲ့ လူ (၅) ယောက်လောက် ဆန့်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ လိုက်ပါ နိုင်တာမို့ အသုံးပြုကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စီး ကားတွေအဖြစ် အသုံးပြုနိင်တဲ့ ကားလေးတွေပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ အင်ဂျင်သေးငယ်တဲ့ အတွက် မြို့တွင်းလောက်ပဲ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် ၆၆၀ စီစီ ဖြစ်တဲ့ ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ဆီ ဖြစ်မောင်းနှင်တဲ့ ကားတွေကို အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အတွေ့များတဲ့ ၂၀၀၆ ကနေ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ L 275 စီးရီးတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းတို့ကတော့ မီရာ ကားတွေရဲ့ မျိုးဆက် (၇) ဆက်မြောက် ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဘီးမောင်း စနစ်တွေကို မော်ဒယ်နံပါတ် L 285 တွင် တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၆၆၀ ရှိတဲ့ အင်ဂျင်ဖြစ် ဆလင်ဒါ ၃ လုံးပါ အမျိုးအစားကို သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဂီယာထဲတွင် သုံးချက်ထိုး ဂီယာနဲ့ ၄ ချက်ထိုး ဂီယာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာ ဘောက်စ်ကို ရှေ့ထိုင်ခုံ နှစ်လုံးကြားကနေ ကား ဒတ်ရှ် ဘုတ်ဆီကို ရွေ့လျားခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်အီ ဟတ်ဆု မီရာတွေကို တစ်ခြား နာမည်တွေအနေနဲ့လည်း လူသိများကြပါတယ်။ဒိုမီနို၊ ကူအိုရယ် စသည့်ဖြစ်သိကြပြီး ချယ်ဆီး အကွဲတွေ၊ အမျိုးအကွဲတွေ အများကြီးနဲ့လာပါတယ်။ နောက်ဆုံး အမျိုးအစားကွဲမှာ လေးမျိုးသော မော်ဒယ်ရှိပါတယ်။ ဌင်းတို့ကတော့ မီရာ၊ မီရာ အေဗီး၊ မီရာ ဂျီနို၊ မီရာ ဗန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြီးရီးယားမှာတော့ ဟန်ဒီဗန်လို့ လူသိများပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဟန်ဒီလို့ လူသိများပါတယ်။
ကားပုံစံနဲ့အညီ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ ဂီယာဘောက်ကို နေရာစားသက်သာအောင် ကား ဒတ်ရှိဘုတ်မှာ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ချို့ကားတွေမှာတော့ သူနေရာ အတိုင်းပဲ အော်တိုဂီယာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်အီဟတ်ဆု မီရာဟာ လောင်စာဆီစား သက်သာပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေဆီမှာ ဓာတ်ဆီ ၁ လီတာကို ၂၅ ကီလိုမီတာ ရောက်ရှိန်ိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒိုက်အီဟတ်ဆု မီရာတွေဟာ အသေးစား မိသားစုတွေအတွက် အဆင်ပြေလှပြီး အလုပ်သွား ၊ ကျောင်းသွား များအတွက် အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းမှာ လုံခြုံရေးတွေ အတွက် ကားလေအိတ်တွေနဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ကားလော့ခ်တွေပါ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် မီရာတွေရဲ့ ဈေးအနေနဲ့ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၀၉ ကို အတွေ့ရများပြီး ဈေးနှုန်းတွေကတော့ ကျပ်သိန်း ၆၀ ၊ ၇၀ ကနေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထိ ရှိနေပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ မီရာလေးတွေကို တစ်ပတ်ရစ်ထဲမှာပဲ ၀ယ်ယူစီးနင်းနေကြပြီး ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၀၉ ကားတွေကို အများဆုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စထုတ်တာက ၂၀၀၆ မှ စထုတ်တာ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ထိ ထုတ်လုပ်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူ၊ ငွေရောင် နဲ့ စတဲ့ အရောင်များကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မှန် အော်ရီဂျင်နယ် အမည်းရောင်တွေ ပါရှိတဲ့ ကားတွေကိုပါ တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။